जीवनशैली Archives – Samacharpati
विश्व नेताहरूलाई एकठाउँमा ल्याउने ‘र्याली अफ होप’ हुदै
माछापुच्छे धितालमा एकीकृत पाठ्यक्रमवारे प्रबोधिकरण
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ७०पुग्याे
अभिनब चौहान र निरु आचार्यकाे स्वर रहेकाे माैलिक तिज गीत बजारमा
संसारमा लगभग ६० करोड मानिस नङ टोक्ने गर्छन् । मनोवैज्ञानिकहरूका अनुसार, मानिसहरू चिन्तित वा बोर हुँदा अनायासै नङलाई दाँतमुनि पार्छन् । यो एक प्रवृत्ति मात्र हो । नङ चपाउनु गलत भएको भनी बच्चाहरूलाई बताउँदा पनि केहीले छोड्दैनन् र पछि ठूलो हुँदासम्म चपाउने बानी बस्छ ।नङ चपाउनुले मानसिक तनाव र अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डरको संकेत दिन्छ । […]
कहिले पनि नछुट्ने मायालु जोडी ! यी राशि हुने प्रेमी प्रेमिकाहरु कहिले पनि छुट्दैनन् !
पाेखरा, २९ असार । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन्,जुन राशि भएका प्रेमी प्रेमिका कहिलेपनी छुट्दैनन् । उनीहरूको सम्बन्छ एकदमै बलियो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार नै १२ राशि रहेका हुन्छन् । ती राशि अनुसार मानिसको स्वभाव आचरण फरक रहेको हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसहरूको प्रेम सम्बन्छ पनि फरक फरक हुने कुरा ज्योतिषहरू बताउँछन् […]
पाेखरा, २८ असार । ज्योतिष विज्ञानमा हामी जो कोही धेरै विश्वास विश्वास गर्छौ । हुन पनि हो, ज्योतिष विज्ञान भनेको हाम्रो मानव जीवनमा जोडिएको एक शास्त्र हो । ज्योतिष शास्त्रले भनेका र भविष्यवाणी गरेका कतिपयकुराहरू मिलिरहेका छन् । यस्तै मध्य एक राशि अनुसारको व्यवहारको पनि निकै चर्चा हुने गर्दछ । मानिसका फरक फरक राशि अनुसार […]
पर्समा राख्नुहोस् यी चीज, कहिलै हुँदैन पैसाको कमी
धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने चाहाना हरेकको हुन्छ र यसको लागि मानिसले कडा परिश्रम पनि गर्छ। तर पैसा कमाउँदा पनि कयौँपल्ट तपाईको पैसा नबच्ने समस्या हुनसक्छ। शास्त्रको अनुसार यस्तो केही चिजहरु छन् जसलाई तपाईले आफ्नो पकेटमा राख्नाले धन जोगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो साथमा यस्ता ५ चीज राख्नु भयो भने तपाइको कहिल्यै पनि हात खाली हुनेछैन।तल […]
करेला सेवन स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । कम्तीमा हप्तामा एक पटक करेला खानुपर्छ । किनभने अन्य सब्जीको तुलनामा यसमा धेरै औषधिय गुण हुन्छ । यो खाएपछि सजिलै पच्छ । करेला प्रोटिन, क्याल्सियम, कार्बोहाइड्रेट, फस्फोरस र भिटामिनको स्रोत हो । यद्यपी करेलालाई स्वादिलो बनाउन फ्राइ गर्ने, तेलमा तार्ने गरिन्छ । धेरैजसोले त डिप फ्राइ गरेर करेला […]
पाेखरा, १५ चैत । शास्त्र र आयुर्वेदमा दिनको समय काम गर्नका लागि अनि राति चाहिँ सुत्नका लागि निर्धारण गरेका छन् । तर रातमा ड्युटी हुने मानिस त बाध्यतावश राति उठ्ने र दिउँसो सुत्ने गर्छन् । कोहीकोहीको चाहिँ दिउँसो सुत्ने बानी परेको हुन्छ । तर शास्त्र र आयुर्वेदमा दिनमा सुत्न अनुचित मानिएको छ । दिउँसो सुत्दा […]
रिस उठेपछि बदला लिन खोज्नु धेरै मानिसको स्वभाव हुन्छ । हामीहरु धेरैलाई लाग्न सक्छ कसैले हामीमाथि आक्रमण गर्छ वा केही भन्छ भने त्यसमाथि तत्कालै आक्रमण गरिहालौं । यदि ऊ हामीभन्दा बलियो छ भने हामीहरु मनभित्रै कुण्ठा बोकेर बस्ने गर्छौं । यदि कमजोर व्यक्ति छ भने हामी त्यसको प्रत्याक्रमणमा उत्रिहाल्छौं । कसैले गरेको आलोचनामा मात्रै पनि […]